Uma uhlangana ngesilinganiso wabesifazane amahle kakhulu emhlabeni, ungakwazi ukuhlangabezana eziningi amagama abadumile. Uhlu kuhlanganisa kokubili "ubudala" - u-Brad Pitt, Dzhordzh Kluni futhi Antonio banderos, futhi abadlali abancane - Armand Douglas, Genri Kevell futhi Dzhensen Eklz. indawo nesishiyagalombili simo kuyinto Ian Somerhalder. Filmography umlingisi seliphindeke izikhathi ezingaphezu kuka-30 sici amafilimu kanye uchungechunge TV ukuthi ukhuluma wokuziphilisa omuhle futhi siyathela ebhayisikobho. Hard ukusho isizathu ukuthandwa okukhulu Somerhalder - esihle idatha yangaphandle noma lilingise ithalente. Abazinikezele bathi nokuthi, futhi omunye uhlobo wakhipha okweqa Jena, thina bantu abafayo ungakwazi kuphela zibabaza konke lokhu ubukhazikhazi.
Ian Somerhalder wazalwa ngo-December 8, 1978 Louisiana, edolobheni elincane lase-Covington. uyise Ian kwakungu usonkontileka isakhiwo ngokwengxenye isiFulentshi, izimpande ngokwengxenye isiNgisi, unina - a obhucungayo, nengxenye-Irish, isigamu Indian. Igama eliphelele umlingisi - Yen Dzhozef Somerhalder. Anakho omunye udadewethu omdala (iminyaka 8 umehluko) Robin nomfowethu omdala Bob (iminyaka 7 umehluko). ingane ezimbili zokuqala zenziwa ogama lakhe behlonipha uyise - URobert.
U-Ian akhula e ngasolwandle edolobheni elincane Mandeville, kanye nezinhliziyo ezichichima izinkumbulo umlingisi, kulokhu, kuyinto okusikhumbuza ngaphezulu idyll yasemakhaya - 900 esingamahektare imikhiqizo imvelo kanye nehhashi siqu. Umama u-Edna safaka kancane Ai-Jay uthando imithi zaseMpumalanga kanye nokudla, kanye nokunakekela nabafundisi izikole zamaKatolika ingxenye yemfundo yakhe engokomoya.
Iqhaza lokuqala Ian yayineminyaka eyisithupha ubudala - wayedlala uRolf e "The Sound of Music." Ngakho, nakuba namanje ayikho esidlangalaleni eminingi ezwa ukuthi inkanyezi entsha - umlingisi Ian Somerhalder. Filmography esizayo inkanyezi ingakahambisani zihlanganisa yimuphi umsebenzi, kodwa lokhu kumane nje kuyisiqalo loko, futhi phambi kwalo ulinde nje impumelelo.
Lapho Ai-Jay kwaba iminyaka engu-10 ubudala, waqala ukubheka imisebenzi ibhizinisi yokumodela. Nakuba igama elithi "ingxenye" akulona ngempela ezifanele - wayengumuntu ngaleso yobudala babekwazi ukunikeza okuziphilisa. Umqondo wokuba imodeli ingeyamakhosi umama, kodwa Ian ngomdlandla asekelwe, futhi kuze kube sekupheleni ukuqeqeshwa esikoleni phakathi imibukiso kuphela. Ian seziqalile ukusetshenziswa wakhe isibonelo izingubo zezingane, kodwa kamuva wagcina esehlala khona ezingeni international sina futhi waqala ukusebenza zindlu imfashini ngokuthi "Versace," "UKelvin Klyayn" futhi "Gucci". Kulokhu, it kungaphazamisi imodeli ukukhula ongaphakeme -. 177 kuphela cm Ngakho Somerhalder wazibonakalisa zonke abagxeki ukuthi kubalulekile umbono jikelele ebhizinisini yokumodela, nakho konke okunye kuyinto yesibili.
Lapho inkanyezi esizayo engu-14 ubudala, abazali bakhe bahlukana. Ian uye wasekela lesi sinyathelo, kusukela ngaleso sikhathi ubuhlobo phakathi kwabashadile owawufana imisebenzi yezempi. Kodwa ngemva kwesehlukaniso, baba abangane abangcono kakhulu uma ungangiboni, khona-ke abantu okungenani eduze ezinokuthambekela okuhle komunye nomunye.
Umsebenzi ku ebhayisikobho
Nokho, imodeli umsebenzi lisamanelisa Somerhalder. Wazama ukusebenza nge nkundla iqembu zendawo dramklube ngezikhathi isinyathelo. Lapho ngineminyaka engu-nesikhombisa umfana wathatha izinqumo ezibaluleke kakhulu empilweni yami, waya anqobe New York has njengoba kumdlali. Ngakusasa iminyaka emibili ngifundiswa-Jay ezahlukweni esebenza amakilasi ne osolwazi ovelele kakhulu - UWilliam Esper futhi Daveni McFadden.
abalandeli abaningi bakhathazekile ngomphumela kwalokho, lapho beqala ukubona esikrinini esiliva Ian Somerhalder. umlingisi Filmography owaqala ngokuvukela ifilimu "Black and White", kodwa endaweni yesehlakalo ephethe inkanyezi esizayo okwalapha ukusika. Kulandela ukubukeka cameo e Woody Allen sika "Izıthwebulo 'wahlupheka zabulawa.
Ngakho lapho kuba uvele okokuqala esikrinini Ian Somerhalder? umlingisi Filmography waqala oluthi "buzz Omkhulu" (1997), kodwa DEBUT yakhe yangempela ubhekwa indima kule drama-sci-fi "Manje noma Ungalokothi" (1999). Impumelelo yokuqala enkulu kuza ngemuva ukuqopha uchungechunge "AmaMelika Young" (2000). Bese kulandele izipesheli kusuka kwamanye uchungechunge, futhi Yen uthola izindima "Crime Scene Investigation" (2000), "Anatomy yobugebengu" (2001), "Izimfihlo Smallville" (2001) kanye "CSI: Miami" (2002).
Ian Somerhalder: Filmography. Iqhaza main umlingisi
Le filimu "Imithetho of Attraction" (2002) baletha umlingisi ukushayelwa athandwa. Lapha, u-Ian wadlala yongqingili, leyo, ngokuvumelana umlingisi, akazange wacabanga mayelana Empeleni, kungakhathaliseki ukuthi ukwamukela lesi sabelo. indima Landelayo kancane badumazeke Somerhalder - Boone, wayedlala ochungechungeni TV "Lost." Kodwa abagxeki bama bananela lolu umsebenzi owengeziwe kahle - ngokusho kongoti, kwaba ngowokuqala, lapho kungekho khona ukugcizelela ibekwe ukubukeka, futhi oyibamba okuhle.
Ngemva ukuqopha umbukiso Ian uthola indima "Pulse" horror movie (2006), okuyinto lasuswa kusukela umnotho waseRomania. Bese umsebenzi olandelayo ifilimu ezimele "I-Sensation Abukhali" (2006). Khona-ke, umlingisi wabuyela esigabeni, futhi ngonyaka kusukela ngo-2005 kuya ku 2006, udlala ukukhiqizwa "Inja ubona uNkulunkulu." Abagxeki bajabula kakhulu kokubili Ian futhi wonke play.
Okokuqala lokudlala indima yomuntu ovelele Somerhalder ingena miniseries "Marco Polo" (2007), lapho, eqinisweni, kudlalwa isihambi abadumile. Kulandelwe ngemisebenzi eziningana, ukubaluleka bokubeka okuyinto kuyangabazeka ngaphezulu.
Ukuthandwa kunazozonke yen baletha kakhulu uchungechunge oluthi "Vampire Diaries", lapho kudlalwa ecashe kodwa ebukekayo kakhulu Damon Salvatore (2009 -. 2014 GG). Ukuqopha uyaqhubeka namuhla nangayo yonke isiqephu udumo entsha elikhulayo umlingisi. Ngo parallel, ekhiqizwa namanye ama-movie ne-Ian Somerhalder - ukuthi 'Awakening "(2009), esithi" Indlela Yokwenza Love to a Woman (2010), "Caught on tape" (2013) kanye "Isikhathi sifushane" (2013, ) ..
Ama-movie ne-Ian Somerhalder njalo kwavusa isithakazelo phakathi komphakathi, kodwa kunzima ongaphika ukuthi umsebenzi wakhe oyinhloko kwakuwukushumayela indima Deymona Salvatore. Vampire indaba ephathwayo luseyintandokazi, futhi eziningi abadlali kusukela ochungechungeni TV "Vampire Diaries," "Igazi Yiqiniso," "Twilight," bajabulela izithelo impumelelo yakhe. Kodwa kuyoze kube nini isikhathi eside yini beshadile? Futhi uma izohlala abathunjwa of indima?
Endabeni Ian Somerhalder, lezi ukwesaba avele akunasisekelo. Yena ngaphambilini inkanyezi emisebenzini yimpumelelo, esikhathini esizayo, sithemba, ngeke sijabulise abalandeli imisebenzi emisha.
Ukubukeka kanye nesitayela
Yiqiniso, isabelo esikhulu ukuthandwa mina-Jay nomthelela ukubukeka kwakhe esimnandi oluvelele. Ngo-2010, ubizwa ngokuthi umuntu okhanga emhlabeni, futhi indlela yakhe ingubo ozama ukukopisha eziningi amadoda. Isitayela Somerhalder - a ukunganaki ejwayelekile isiNtaliyane, kancane cheeky, esiwusizo, kodwa ngaso sonke isikhathi nenhle. Jena Okuvamile - kuyinto amahembe unbuttoned, jeans, lesikhumba jackets. Imfanelo Esisemqoka - isigqoko, banayo eziningi kumdlali. Emicimbini olusemthethweni Somerhalder ofaka zokubhukuda esiqinile zasendulo amathoni amnyama.
Ama-movie amasha ne-Ian Somerhalder akakubangeli kwanyakaza okunjalo, njengoba amahemuhemu mayelana ngempilo yakhe yangasese. Nakuba kunjalo, kufanele kuphawulwe ukuthi, naphezu ukubukeka, akudingeki inkazimulo smoothie futhi oyengela ebulilini. Nge ngamunye izinkanuko lwakhe, wahlangana isikhathi eside - ngo-2003, Bosuort Keyt, bese nge Nicky Hilton, futhi ngesikhathi ukuqopha yochungechunge "Lost", waqala ukwakha ubuhlobo nalo lolo actress Meggi Grays. Lokhu indaba wahlala iminyaka eminingi, kodwa ngaleso sikhathi ngiyokwazi-Jay bashintshele Megan mayelana, bese kuya ebukekayo "vampire" Eshli Grin.
Mina maduze abayohlanganiswa nomuntu zabo phetho siqu Ian Somerhalder? Umshado is kuhlelwe, kodwa esikhathini esithile esidlule kwaba namahemuhemu ukuthi lokhu ukuthuthukiswa kungenzeka. Chosen ngokuthi Nina Dobrev, ngubani ndawonye naye enza okuphambene "The Vampire Diaries." Akwaziwa ukuthi lokhu kwaba yangempela kuthandana, noma kwaba kuhle kakhulu Stunt emphakathini, kodwa hhayi kangako kudala, lo mbhangqwana yamemezela sokuvalelisa. Ngakho ukuthi izigidi zamantombazane emhlabeni wonke ube ithuba lokuwina inhliziyo Thixo wakhe.
abalandeli abaningi banesithakazelo kulokho abanye amafilimu ngeke inkanyezi Ian Somerhalder. Indima umlingisi ahlinzekwa kaningi, futhi unekhono ukhethe amaphrojekthi ezahlukene. Okwamanje, ngaphezu ukuqopha ochungechungeni TV "Le Vampire Diaries", Ian imatasa Starring ifilimu "Anomaly". Umumo Wakhe uncharacteristic ngokuba i-Ayi-Jay - he is a soldier owayekade iwela isimo ongaziwa futhi kumelwe siqonde ukuthi kwenzekani.
Ian igama lakho kwaba behlonipha umbhali odumile we Saga mayelana 007 - Ian Fleming.
Somerhalder kungaba ukudlala kwenye "vampire" uchungechunge - ke auditioned ngoba indima Jason Stekhausa (oyengela ebulilini abakhulu, Nokho, umuntu, hhayi vampire) in the movie "Igazi Yeqiniso."
Damon Salvatore yayidumile ukuze inkampani "Tonnerre" eyakhishwa tridtsatisantimetrovuyu unodoli esibonisa uhlamvu (kufanele kuphawulwe ukuthi ukufana kwaba olukha phezulu kakhulu).
Ngakho, sixoxe ngokuningiliziwe yini Ian Somerhalder. Filmography yakhe inkulu ngakho elikuvumela ukuba aqhubeke ethembela ukubukeka umsebenzi ohloniphekile. Bonke abalandeli kudingeka ube nesineke futhi ulinda movie entsha nge umlingisi ozithandayo kuphela.
Amahholo Movie e Rostov-on-Don - ikakhulukazi ezikoleni